UKEVIN SMITH UZISA 'YENA-UMNTU' KWINETFLIX - YINDODA
Inyikima Yasejapan Ngo-2011
Izinto esizibonileyo namhlanje: He-Man uyeza kwiNetflix kodwa ungalindeli uShe-Ra Crossover
Ngokunikwa impumelelo yeNetflix's Uye-Ra uthotho, kwabonakala kuyindalo ukuba u-He-Man ekugqibeleni ayifumane indlela eya eqongeni lokusasaza, kwaye ngoku sele enayo. UKevin Smith ubhengeze kwi-Power-Con kule mpelaveki ukuba uzakuba ngumphathi ovelisa uthotho olutsha olunomda, Iinkosi zeNdalo iphela: Isityhilelo. Uthotho lwe-anime, njengoko uSmith wayichazayo, iya kugxila kumabali angasombululwanga ee-80s zoqobo kwaye athabathe kanye apho lothotho lwayeka khona.
Ukuba oko kuvakala ngokungafaniyo kwithoni kunye nokusondela kunikaNoelle Stevenson Uye-Ra uthotho, kungenxa yokuba kunjalo. Ngelixa elitsha Uye-Ra yenzelwe ngokukodwa abaphulaphuli banamhlanje, uSmith uxelele isihlwele ukuba sakhe He-Ndoda iya kuba ziiMasters zeNdalo iphela owawusoloko ufuna ukuyibona njengomntwana! Ke ngokungafaniyo nemithombo yabo yoqobo, akukho nto ibonisa ukuba la manqaku mabini ayakuwela omnye komnye.
Ngelixa oku kungavakali njengejam yam ethile, ndiyazi ukuba kukho itoni yabantu phaya abaya konwaba nyani ngolu luhlu. Mhlawumbi loo madoda athanda ukundibhalela ii-imeyile ezinde malunga nokuba intsha kanjani Uye-Ra eyoyikisayo kwaye eyonakalisayo ebuntwaneni babo ekugqibeleni baya kufumana uxolo besazi ukuba into ekugqibeleni, kube kanye , iya kuba yeyabo.
(nge I09 )
Ngaba ufuna into elungileyo I-D & D- umgca wokuthabatha umxholo? Nazi ezingama-50 IJeekology )
Hayi indlela emhlophe, ethe tye, eyindoda eyenze ngayo imiboniso bhanyabhanya ye-vampire yesini yabasetyhini. (nge Ixhalanga )
KwiForum kaMongameli waseMelika uFrank LaMere waseMelika eSioux City, eIowa, uElizabeth Warren wathetha ngeempazamo zakhe, esithi, Ndiyaxolisa ngobubi endibenzileyo. Ndimamele kwaye ndifunde okuninzi, kwaye ndinombulelo ngencoko ezininzi esibe nazo kunye. Nokuba zithini na iingcinga zakho ngezenzo zakhe okanye ukuxolisa kwakhe, umbono wokuba nomongameli owaziyo amagama athi ndiyaxolisa kwaye uthembisa ukuhlala emamele yinto entle. (nge Induli )
Kwiveki ephelileyo, uKylie Cheung ubhalele iVeki kwikholamu yoBulungisa bokuZala ukuba uParenthood oCwangcisiweyo wayelungiselela ukunyanzelwa ngaphandle kwenkqubo yesihloko X. Ewe, yenzekile. Biza abameli bakho , kuba banamandla okulungisa le kwaye ngumsebenzi wabo ukumamela kuwe.
Namhlanje, umphathi weTrump uyasinyanzela ukuphuma kwinkqubo yesihloko X - inkqubo yesizwe sethu ijolise kucwangciso-ntsapho, apho sisebenza khona i-40% yezigulana. Olu luhlaselo ngqo * kubuzali obuCwangcisiweyo nakwimpilo namalungelo ethu, kwaye asizukuyimela loo nto. #YimaniPPP #KhuselaX pic.twitter.com/WRMvzGafNq
Umzali oCwangcisiweyo (@PPFA) Nge-19 ka-Agasti ka-2019
ibhola yebhola yedragini i-super dub cast
Omnye kuni uthumele le yethu Ewe, ngokwenyani iqela leFacebook kwaye andiyekanga ukuhleka.
Ayingawo onke amadoda https://t.co/xHRUQ6oN4c
-UDarin A. Robinson II (@ rain4estwhitaka) Nge-12 ka-Agasti ka-2019
Nantsi yonke iSuperman kunye ne-DC Comics I-Egg ye-I IKrypton Ixesha lesibini. (nge Umhadi weGeek )
Kuyabonakala ukuba, wayekhona kakhulu umahluko phakathi kwe Ehlotyeni sifumene kunye nokusikwa komlawuli. (nge IPajiba )
Ngaba ungayisebenzisa imifanekiso yemidlwane ye-cosplaying? Ewe unakho. (nge USA Namhlanje )
Mvulo omtsha, wonke umntu!
(umfanekiso: Mattel / Umboniso bhanyabhanya)
Ikaraoke Yenqwelo Mafutha
Imuvi yakudala yekhathuni eneempuku
Ukutsala ngokwesondo kubalinganiswa bekhathuni
ndingayidlala loo snl
Umdlalo womnatha wekhathuni wekhathuni
wenza njani kwabanye abantwana
ibuzzfeed nini ingasonjululwanga ibuya